Ihe omuma nke elu nke elu 6 Akụkụ nke Data Data Extractor
Web Data Extractor bụ otu n'ime ọrụ kachasị ama ma ama.A na-eji ya nyocha ozi sitere na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi dị iche iche, saịtị dị ike, ọbịbịa njem, ebe nrụọrụ weebụ na ịntanetị.
Ị nwere ike iji Data Extractor na-anakọta na data nchịkọta site na URL ndị ọzọ, mkpado meta, utu aha na nkọwa. Ịnwere ike ịhazi data gị dabere na mkpụmkpụ-ọdụ na ogologo-keyword keywords with this tool. Enwere uru ndị dị mkpa nke Web Data Extractor n'okpuru ebe a.
1. Ngwaọrụ niile:
Web Data Extractor bụ ihe niile na-arụ ọrụ dị iche iche n'otu oge ahụ. Ọ bụghị naanị ihe nchịkọta zuru oke kamakwa ọ bụ onye na-agbawapụta weebụ. Site Web Data Extractor, ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị na saịtị gị ma ọ bụ nwere ike ịdọrọ ibe weebụ maka mma search engine rankings. Ọrụ a na-ewepụtakwa ozi site n'ichegharị adreesị email, nọmba ekwentị, na nọmba fax, na-enye gị nsonaazụ ziri ezi na oge.
2. Nzuzo na Nchebe:
N'adịghị ka ndị ọzọ scrapers data , Web Data Extractor na-eme ka nchekwa na nchekwa gị dị na Intanet.Ozugbo a kpochapụrụ data ahụ, software a na-echekwa ya na nchekwa data nchekwa ma mee ka ọ dịrị gị mfe ibudata faịlụ na draịvụ ike gị. Onye ọ bụla agaghị enweta gị ma kpochapụ ọdịnaya. N'ezie, ị nwere ike ichebe faịlụ gị dị nro na paswọọdụ.
3. Nchekwa spam zuru ezu:
Web Data Extractor na-echebe data gị site na bọtịnụ ọjọọ na spam. A maara ya nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ezigbo ozi na ezigbo data. Na ọrụ a, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara àgwà ahụ. Ejichara URL niile na nchekwa data nzuzo ma echekwa ya na nchekwa data ya. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na-enye data nzacha, ederede nzacha, na nchịkwa ntanetị. Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta-ịhọrọ ntụrụndụ.
4. Nnukwu ọdịnaya weebụ maka ụlọ ọrụ:
Otu n'ime nsogbu ndị siri ike anyị na-eche ihu bụ mma na idozi ọdịnaya. Anyị enweghị ike ịmepụta isiokwu na nzacha nke mmepe ma ọ bụ nke na-agụnye asụsụ. Onye na-ewepụta Data Weebụ na-edozi isi na obere njehie na ibe weebụ anyị na-akpaghị aka. Ọzọkwa, ngwa a na-enyocha ọtụtụ ebe dị iche iche ma dị mma maka ụlọ ọrụ.
5. Ụdị nsụgharị dị iche iche dị:
Ị nwere ike ịnweta nsụgharị ya n'efu ma kwụọ ụgwọ n'otu oge ahụ. Maka mmalite, freelancers na webmasters, Web Data Extractor bụ ụzọ dị mma maka mbubata. Ee. Maka ulo akwukwo na ndi buru ibu, ugwo ya di. Akụrụngwa adịghị oke ọnụ ma kpughepu nhọrọ na atụmatụ dị mma maka gị. Ọ na-eji ngwa ụzụ na-eme nchọpụta nke ọma na teknụzụ abstraction anya iji tọọ ihe ọmụma site na ọtụtụ puku saịtị. Site na Data Data Extractor, ị nwere ike ịmepụta mmadụ dị iche iche nchịkọta ihe na ihe nke sekọnd ma ọ dịghị mkpa ọ bụla mmemme mmemme.
6. Njegharị Ịntanetị nwere ọgụgụ isi:
Onye Ntanetị Ntanetị na-achọgharị site na ibe weebụ dị iche iche wee nweta gị ozi ọhụụ n'ogologo. Naanị ị ghaghị ịkọwa data ma kwe ka ọ chọpụta njikọ dị n'ime na mpụga. Akụrụngwa ga-anakọta na hazie data. Ị nwere ike nweta nsonaazụ ọchụchọ na nkeji abụọ ma ọ bụ atọ. Onye na-ewepụta Data Weebụ na-ekwu na ọ ga-ewe ihe karịrị nde weebụ 1 nke dị ugbu a Source .